विचार – Online Jagaran
२८ आश्विन २०७८, बिहीबार ०८:३४ October 14, 2021 जागरण
अच्युत शाली घिमिरे दसैं घरघरमै आइसक्यो। टाढा-टाढा जिल्लामा जागिर भएकाहरू गाउँ ठाउँ फर्किसकेका छन्। कोही फर्किने क्रममा छन्। परदेश गएकाहरू पनि आफ्नो देश फर्किंदै छन्। दसैं सँग-सँगै नयाँ-नयाँ लुगा किन्ने चाहना पनि बढेर आउँछ। वर्षभरि थोत्रो लुगा लगाएर भए नि दसैंमा चाहिँ नयाँ लुगा हाल्न करै लाग्छ। यो हाम्रो चलन हो, देखासिकी हो। घरभरिकालाई नयाँ […]
२७ आश्विन २०७८, बुधबार १७:२८ October 13, 2021 जागरण
चन्द्रा खत्री बाँकेको चिसापानीमा १७ बर्षीया एलिसा शाह आफ्नै घरमा आफ्नै सलको पासो बनाएर झुण्डिईन् । सदाझैं घरभित्र पस्दैगरेका अभिभावकले यो हृदयबिदारक दृष्य हेर्न बाध्य भए । बा आमा निरिह थिए । आफ्ना अधुरा सपना आफ्नै छोराछोरीबाट पूरा गर्नखोज्ने बा अमाका लागि यो भन्दा ठूलो पीडा के नै हुनसक्छ र । अघिसम्म आँखा वरपर देखिएकी […]
२४ बैशाख २०७८, शुक्रबार १८:५९ May 7, 2021 जागरण
डा. शंकर रिजाल । के कोरोना हुदैमा मान्छे मरिहाल्छ्न त अनि बाच्नलाई सबैलाई अक्सिजन सिलिण्डर नै चाहिन्छ त ? हामिले सबै भन्दा पहिले कोरोना भएका सबै को वाच्ने आधार oxygen को cylinder नै हो र pulse oximeter नै हो भन्ने भ्रम बाट अलि गहिरिएर सोच्ने गरौ । कोरोना लागेका सबैलाई oxygen नै आवश्यक पर्छ भन्ने […]
१ बैशाख २०७८, बुधबार ०८:४२ April 14, 2021 जागरण
आजदेखि सुरु भएको नयाँ वर्ष २०७८ सालको शुभ अवसरमा स्वदेश तथ विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण वीरेन्द्रनगरवासी एवं नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु । नयाँ वर्षको आगमन एउटा उत्साह र हाैषलापूर्ण हुन्छ । यस वर्षलाई हामीले उत्साह र आशाकाे वर्षको रुपमा मनाउनु पर्छ । हामीले अहिले सम्म गरेकाे कामको समिक्षा र नयाँ […]
३० भाद्र २०७७, मंगलवार ०८:१९ September 15, 2020 जागरण
तिमी हाम्राे च्ये गाेभारा हाै । आहा हाम्रा लागि प्रिय नाम चे । जस्ले डाक्टर जीवन छाेडेर बन्दुक बोके । जस्ले जनताकाे मुक्तिको गीत गाए । हाे तपाईं हाम्राे त्यस्तै प्रिय पात्र हाे दाई । तपाईं उदाउनु भयो विद्राेह बोलेर । तपाईले पनि सयलकाे जीवन छाेडेर जनताकाे मुक्तिकाे मुद्दामा उभिनु भयो । गतिलाे जागिर र […]
२६ श्रावण २०७७, सोमबार १४:२० August 10, 2020 जागरण
सर्वत्र चर्चा र चासोमा रहेको शब्द हो, भ्रष्टाचार । कतिसम्म भने यो शब्द आशिर्वाद, अर्ति–उपदेशदेखि गालीसम्ममा प्रयोग हुने गरेको छ । अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई होस् या शिक्षकले विद्यार्थीलाई ‘जीवनमा भ्रष्टाचार नगर्नू’ भनी सम्झाउँछन् । ‘भ्रष्टाचार गर्नु अपराध हो’, ‘भ्रष्टाचारले तपार्इं र तपाईंको परिवारलाई पोल्छ’, ‘पाप धुरीबाट कराउँछ’ जस्ता उखान् समेत हाम्रो समाजमा प्रचलित छन् । […]
१८ श्रावण २०७७, आईतवार ११:३३ August 2, 2020 जागरण
प्रकृतिमा बरदान अथवा उपहार पाएको मेरो देश स्वर्गको एक हिस्सा हो । त्यसमा पनि कर्णाली प्रदेश । प्राकृतिक रुपमा सुन्दर, अनि धार्मिक, ऐतिहाँसिक र पर्यटनको उति नै सम्भावना बोकेको अनुपम स्थान हो । यस प्रदेशको प्राकृतिक सौन्दर्यताले सबैलाई लालयित बनाउँछ । यस प्रदेशमा रहेको विविधतायुक्त समाज र प्राकृतिक सौन्दर्यताको त बर्णन गरेर साध्यै छैन । […]
“प्रदेश र स्थानिय सरकारको निती–कार्यक्रम, प्रभावकारी बजेटबारे केहि सुझाव !”
२८ जेष्ठ २०७७, बुधबार १३:३० June 10, 2020 जागरण
कर्णाली प्रदेशलाई विकट, अशिक्षा, भोकमरी, गरिवी र बेरोजगारी अनि असभ्यता सुचकको रुपमा चित्रण आम रुपमा नै गर्ने गरिन्छ । वास्तवमा यसका केहि आधिकारीक तथ्याङ्क र सुचकहरुले पनि यो संदेश दिएको कारण आज सवैभन्दा पिछडिएका देशहरु मध्येमा नेपाल र नेपालभर पिछडिएको क्षेत्रमा कर्णाली क्षेत्र भनेर बुझ्ने र बुझाउने धेरै गरिन्छ । कर्णाली क्षेत्रको अथाह साधन–श्रोत, सम्पदा– […]
कोरोनाले बदलेको विश्व र नेपाल
१२ जेष्ठ २०७७, सोमबार १४:०४ May 25, 2020 जागरण
विश्वभरका कल कारखाना, बैङ्क, सुपमार्केट, रोजगार सिर्जन गर्ने बिभिन्न संस्थालगायतका ठुला साना व्यबसायहरु आंशिक रुपमा बन्द अवस्थामा रहेका छन् । ठूला निर्माणका काम देखि साना निर्माणका कार्यमा समेत कोरोनाको प्रभाव परिरहेको छ । यातायातका साधनहरु, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानहरु आंशिक रुपमा बन्द छन् । विश्वका शक्तिशाली मुलुक देखि सबै मुलुकमा यसको प्रभावमा परिरहेको अबस्था […]
“त्यो जिउँदो जङ्गे रणनीति र मुर्झाएको जागिरे कुटनीति, पाएको नयाँ नेपाल र आजको कालापानी”
१ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १३:१५ May 14, 2020 जागरण
ग्रेटर नेपालको ऐतिहाँसिक नक्सा पल्टाएर हेर्नुहोस् । तपाईँको मन पक्कै भावविहल हुन्छ, अनि कति दुख्छ, आँखा रसाउँछन्, अनि गला र मस्तिष्क कति अवरुद्ध भएर आउँछ । फेरी लामो श्वास तानेर एउटा मिठो सपना हो भन्ने सोच्नुस् अनि फ्रेस हुनुस् आफ्ना पूर्खालाई सम्मान गर्नुस् र एकछिन बिसाउनुस् । ठुलो नक्सा छोडेर अब अहिलेको नक्सामा आउनुहोस् […]